थकाइ कम गर्ने केहि उपाय जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it बेसार खानु हुन्छ नि ? यसरी खाए अनगिन्ती फाइदा छन्, थाहा पाउँनुहोस्
Up Next के तपाईलाई पटक-पटक भोक लाग्ने गर्छ ? सावधान ! पटक-पटक भोक लाग्नु यस्तो रोगको लक्षण हो
डिप्रेसनबाट बच्न च्याउ
बेलायतस्थित इम्पिरियल कलेज अफ लन्डनका अनुसन्धाताद्वारा गरिएको यो अनुसन्धान ‘साइन्टिफिक रिपोर्ट’ मा प्रकाशित छ । सिलोकाइबिन च्याउ उदासी रोग (डिप्रेसन) को…